မလေးရှားမှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သိစေဖို့ – Wun Yan
မလေးရှားမှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သိစေဖို့
မလေးရောက် သူငယ်ချင်းတို့ရေ… မြန်မာ ပြည်ပြန်လာမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံ စုပါ…… တစ်ကျပ်ရရ နှစ်ကျပ်ရရ စုပါ…. ဘီယာတစ်ဗူး ၆ ကျပ်ဟာ…. မြန်မာ ပြည်မှာ ဟင်းတစ်ရက်စာ ချက်စားလို့ရပါတယ် အသီးအရွက်လေးပဲ ချက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့… မလေးရှားမှာ တစ်ကျပ်ဟာ တန်ဖိုးမရှိပါဘူး မြန်မာ ပြည်မှာ မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲ စားလို့ရပါတယ်… လူတိုင်း နေ့တိုင်း မစားနိုင်ပါ….
အရက်ကြမ်း တစ်ပုလင်း ၁၅ ကျပ်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဆန် နှစ်ပြည်ဖိုးပါ ဆန်ကြမ်းပေါ့… ပိုက်ဆံ သိန်း ၅၀ လောက်နဲ့တောင် စီးပွားရေး ဈေးကွက်ကိုတိုးလို့ မလွယ်ပါဘူး….. ရန်ကုန်မှာ ဆိုရင်ပေါ့….. မလေးရှားမှာ သူဌေးကပွားလို့ စိတ်ညစ်နေလား….. သည်းခံလိုက်ပါ…မြန်မာ ပြည်မှာ အခြင်းခြင်းကပွားနေတာ အတို့အထောင်လုပ်တာ ဂုတ်သွေးတွေစုတ်နေတာ…..တွေ မကြားချင်မှအဆုံး၊
မလေးရှားမှာ လစာတစ်ထောင်ပဲရလို့ မတန်ဘူးလို့ထင်လား…. မြန်မာ ပြည်မှာ ဆယ်တန်းအောင်မှ အသက်ငယ်မှ ရုပ်ရည်ပြေပြစ်မှ လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိမှ.. လစာ တစ်သိန်း၂သောင်းပါ မလေးမှာဆို လေးရာမပြည့်ဘူးပေါ့……ဒါတောင် အလုပ်ရဖို့က သိပ်မသေချာဘူး အစမ်းခန့်က ၃ လ ထားသေးတာ အဆောင်မပေးပါ…….. မလေးရှားမှာ တစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီး သူဌေးက လစာတိုးမပေးလို့စိတ်ညစ်နေလား….. မြန်မာ ပြည်မှာ သုံးနှစ်လောက်လုပ်တာတောင် တိုးပေးတဲ့ အလုပ်ရှင်က ရှားတယ်…..
ရေးစရာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်.,. နောက်ဆုံးတစ်ခု တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ အိမ်ကိုပြန်ပို့ပါ တစ်လကို တစ်သိန်းပဲ ပို့နိုင်ပါစေ တစ်သိန်းပြန်ပို့ပါ….. မိသာစုတိုင်း မျှော်နေကြတာပါ.. တစ်သိန်းကို ခြွေခြွေတာတာသုံးရင် တစ်လသုံးလို့ရပါတယ်…. အိမ်ကို ဆက်သွယ်ကြပါ…. စေတနာဖြင့် ရေးသားခြင်းပါ။